Hery A. – Tarika Ny Railovy: “Mila manao zavatra mba tsy hohadinoin’ny olona” | NewsMada
Hery A. – Tarika Ny Railovy: “Mila manao zavatra mba tsy hohadinoin’ny olona”
Iray amin’ireo tarika manana ny maha izy azy ny Ny Railovy. Na feo na tononkira na fandrindrana, sns, samy manasongadina ity tarika ity avokoa ireo. Misy ny vina efa napetraka, hotohizana izany…
Gazety Taratra (*): Nanana ireo vina kasaina hotanterahina ny tarika Ny Ralovy. Misy ity ny fihibohana, nanao ahoana izy ireny?
Hery Andriamahatana (-): Iray amin’ireo vina ireo ny hanome fiofanana ny mpikambana ao amin’ny tarika. Nitohy izy iny satria nisy hatrany ny fiarahana. Mbola mitohy ihany koa satria tsy maintsy arahi-maso akaiky ny fivoarana misy amin’ireo nomena fiofanana. Eo amin’ny feo beso izahay no tena manao izay fanaraha-maso izay satria anisan’ny mampiavaka ny tarika Ny Railovy ny fananana io feo io. Na izany aza, efa hita soritsoritra ihany ny hitazona izany feo izany ato anatin’ny tarika.
* Hanao ahoana ny fanohizan’ny tarika Ny Railovy ny diany aorian’ny fihibohana misy amin’izao?
– Ny tarika Ny Railovy, tsy maintsy manohy hatrany ny kanto efa nataony hatramin’izay. Efa elaela rahateo izahay tsy tazana loatra. Noho izany, ilaina ny manao zavatra. Raha tsy manao zavatra mantsy, manjary hadinon’ny olona. Tsy ilay tarika ihany no hadino fa ilay kanto ataony mihitsy. Anisan’ny mampirisika anay ihany koa hanohy hatrany ny fahatsapana fa anisan’ny nandray sy mandray ary handray anjara lehibe amin’ny fanabeazana ho olom-pirenena vanona ny sanganasan’ny tarika Ny Railovy. Hotohizina ireo vina efa napetraka.
Raha vao tsy manao eo ihany koa izahay, ny hafa indray no hanao eo!
* … Izany hoe, hanatanteraka fampisehoana lehibe, hamoaka rakitsary sy rakikira, sns, izany ianareo raha vao vantany vao mivaha io fihibohana io?
– Miankina amin’ny zava-misy iainan’ny firenena ihany io. Mety tsy ho tratra amin’ity taona ity angamba ny zavatra goavana be satria tsy maintsy misy fiantraikany amin’ny Malagasy tsirairay izao fahasahiranana izao. Na izany aza, azo inoana fa hamoaka “single” ny tarika Ny Railovy. Efa niomana sy miomana ny ho amin’izany ihany ny tarika. Marobe rahateo ny olona mpitia zavakanto miandrandra fatratra ny vokatra kanto avy aty amin’ny tarika Ny Railovy. Tsy azo atao ny mihazakazaka, indrindra amin’ny fanaovan-javatra aorian’ny fahasahiranana mahazo ny firenena tahaka izao. Mila mandeha tsikelikely hatrany hatrany.